Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Harley-Davidson wuxuu ku dhuftay guul weyn
Isagoo ka jawaabaya dhawaaqii maanta ee ka soo baxay Madaxweyne Biden, Harley-Davidson, Inc. waxay ku dheeraatay mahadnaqa ay u jeedinayso Maamulka Maraykanka oo gaaray xal laga gaaray khilaafka 232-tarif.
Jochen Zeitz, Guddoomiyaha, Madaxweynaha iyo Agaasimaha Guud ee Harley-Davidson, ayaa yiri: "Warka maanta waa guul weyn Harley-Davidson iyo macaamiisheena, shaqaalaha iyo ganacsatada Yurub. Waxaan u mahadcelineynaa Madaxweyne Biden, Xoghaye Raimundo iyo Maamulka Mareykanka, dadaalkooda ku aaddan gorgortankan.
"Waan ku faraxsanahay in tani ay soo afjarayso iskahorimaad aan ahayn samayntayada, oo Harley-Davidson meelna ku lahayn.
"Tani waa sixitaanka koorsada muhiimka ah ee xiriirka ganacsiga ee US-EU, taas oo noo ogolaan doonta inaan sii wadno booska Harley-Davidson oo ah astaanta mootada ee ugu macquulsan adduunka."
Harley-Davidson waxay weli u heellan tahay ganacsi xor ah oo xalaal ah waxayna diiradda saartaa inay ka sii ahaato tartanka caalamiga ah ee danaha dhammaan daneeyayaasha, hubinta macaamiisheeda adduunka oo dhan inay helaan wax soo saarkooda.